Shirkado guryood oo baaritaan lagu sameynayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkado guryood oo baaritaan lagu sameynayo
La daabacay onsdag 14 augusti 2013 kl 13.52
Hey'ada Datainspektionen ayaa baaritaan ku sameyn doonta sideed shirkad guryood oo degmooyin leeyahiin, maadama sida lagu eedeyey ay diiwaan-gareeyaan macluumad la xiriira dadyowga guryaha ka kireysta. Macluumadka la sheegey in shirkadahan diiwangeliyaan ayaa waxaa kamid ah caafimaadka iyo ruuxa qolada uu yahey.
Shirkadaha guri ee la kontrooli doona ayaa ku kalo yaala Alingsås, Helsingborg, Landskrona, Sigtuna, Staffanstorp, Linköping, Hallstahammar iyo Huddinge.
Horey ayey Datainspektionen baaritaan ugu sameysey afar shirkad guryood oo ay lahaayeen degmooyinka Göteborg ku yaala, baaritankaas oo muujiyey in shirkada ay diiwaan-gelin jireen macluumadka dadyowga guryaha ka kireysta.
Diiwan-gelinta noocaas ah ayaa sharci daro ka ah dalkan Sweden. Waana taas waxa keeney in Datainspektionen hada baaritan ku sameyso eedeymaha iska soo dabo-dhacaya ee oranaya in shirkadaha guryaha diiwan-geliyaan macluumaad xasaasiya.